३५ वर्षको उमेरमा १८ औं पटक सुत्केरी |
प्रकाशित मिति :2017-07-18 10:18:42
बैतडी (गोठालापानी) : नगरपालिका भएर पनि विकासका कुनै कार्यक्रम पुग्न सकेका छैनन् यो ठाउँमा, विपन्नतामा बाँचेको परिवारले देवकी त्रिवालाई कलम समात्ने अवसरसम्म दिन सकेन । १५ वर्षमै विवाह र महिना दिनमै गर्भवती बन्नु नियमजस्तै बने उहाँका लागि । देवकीले बर्सेनि जन्माएका शिशुहरूको निसास्सिएर र कठ्यांग्रिएर ज्यान गयो । कतिपय कुपोषणको सिकार भए । लगातार १५ शिशुको ज्यान जाँदा पनि देवकीले फेरि गर्भवती हुनुपर्‍यो । १६ औं पटकमा जन्मिएकी छोरी बाँचिन् तर परिवार खुसी भएन ।
देवकीको भनाइमा सत्यता भएको बैतडी जिल्ला अस्पतालका प्रमुख एवं सुत्केरी रोग विशेषज्ञ डा. गुणराज अवस्थी बताउनुहुन्छ । ‘सुत्केरीलाई श्रीमान्ले समेत छुन्नन् । जतिबेला सबैभन्दा धेरै माया र हेरचाह गर्नुपर्ने हो, त्यतिबेलै सुत्केरीसँग टाढा भाग्छन् उनीहरू । त्यस्ता मानिससँग कैयौंपटक मेरो झगडा नै परेको छ’, डा. अवस्थीले भन्नुभयो, ‘हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी एक्लै हुन्छन् । परिवारका सदस्यले बच्चा र सुत्केरीलाई छुन नमान्दा बच्चालाई न्यानो लुगा लगाउँदा, सफा गर्दा, आमाको दूध खुवाउँदा सहयोग गर्ने कोही हुन्नन् ।’
बैतडीकै श्रीकोटकी पार्वती ठगुन्ना छोराका लागि २७ वर्षको उमेरमा १० पटकसम्म गर्भवती बनिसक्नुभएको छ । छोरी मात्रै जन्माउँदा परिवारले आफूलाई दूधसमेत खुवाउन नदिएको ठगुन्नाको गुनासो छ । सुत्केरी हुँदा कैयौं रात भोकै बस्नुपरेको र राम्रो सुत्ने ठाउँ नहुँदा बिरामी परेको उहाँको भनाइ छ । गर्भवती भएको ६ महिनापछि उहाँले छोएको पानी परिवारलाई चल्दैन । घन्टौं एक्लै छट्पटाएर पार्वतीले छोरीहरूलाई जन्माउनुभएको छ । ‘गर्भवती र सुत्केरी हुँदा हीनताबोध हुन्छ परिवारको व्यवहारले । कहिलेकाहीँ त भीरबाट फालहालुँजस्तो लाग्छ,’ पार्वतीले भन्नुभयो ।
सुत्केरीलाई छुनुपर्ने डरले अधिकांश परिवार ‘बर्थिङ सेन्टर’ सम्म पनि लैजाँदैनन् । लग्नैपर्ने भयो भने स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मा लगाएर कुलेलम ठोक्छन् । कतिपयले त अस्पतालमा बच्चा जन्माउन सहयोग गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्म छुँदैनन् । जिल्लाको महाकाली स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज पूर्णबहादुर बरालीले सधैँजसो छुवाछुतको सामना गर्नुपरेको छ । ‘व्यथा लागेपछि गर्भवती एक्लै झोला बोकेर अस्पताल आउँछन्, त्यो पनि घन्टौं हिँडेर, सुत्केरीलाई छुनुपर्छ भन्ने डरले परिवारका कोही पनि आउँदैनन् । घर जाँदा पनि बच्चा, झोला सबै बोकेर कमजोर बनेकी सुत्केरीलाई एक्लै पठाउँदा हामीलाई नराम्रो लाग्छ ।’
स्थानीय महिला अधिकारकर्मी देवु ठगुन्नाले यस्तो यातना महिला आफैँलाई सहने बानी पर्दा अन्त्य हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘यहाँ हरेक घरका एक जना सदस्य धामी हुने चलन छ । गर्भवती वा सुत्केरीमाथि हुने विभेदविरुद्ध तिनै महिला बोल्न सक्दैनन् । चुप बस्नुपर्ने बाध्यता छ उनीहरूको,’ देवुले भन्नुभयो ।
साभार : अन्नपूृर्ण पोष्ट दैनिक